समता लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १५ वैशाख २०७६)
हाल कम्पनीले १० जिल्लामा २४ शाखा कार्यालयबाट लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा ६ ओटा शाखा कार्यालय थप गर्ने कम्पनीको योजना छ । कम्पनीले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई ६ दशमलव ६६ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरिसकेको छ । शेयरधनीको डिम्याट खातामा उक्त लाभांश जम्मा भएको छ । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. १ करोड ४८ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३ सय ११ प्रतिशत बढी हो ।
सोही अवधिमा कम्पनीले रू. ३६ लाख ९ हजार नाफा कमाएको थियो । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ३५ लाख ६ हजार खराब कर्जा उठाएकाले र खुद ब्याज आम्दानी बढेकाले नाफामा वृद्धि भएको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ५ करोड ६८ लाख छ । कम्पनीको बिहीवार भएको शेयर कारोबारमा खरीद चापको तुलनामा विक्री चाप बढी छ । सो अवधिमा ३ सय ३० कित्ता शेयर खरीद गर्ने र १ सय ९६ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
2019-04-28 - 80 view(s) - abhiyan